“Gaga ny vazaha !” -
AccueilTresaka“Gaga ny vazaha !”
“Gaga ny vazaha !”
26/11/2016 admintriatra Tresaka 0
Nivalampatra amin’ny tany tahaka ireny hoe maty ireny ireo mpikambana ao amin’ny “wake up Madagascar” mba hanehoan’izy ireo ny fahantrana manjo ny Malagasy ary nandefa taratasy tany amin’ny sekretera jeneralin’ny OIF mihitsy araka ny vaovao re.
Voalohany indrindra aloha olona mavitrika sy vonona ary mitraka no dikan’izany hoe “wake up” izany fa tsy olona matory na maty mitsitra amin’ny tany. Na ireo mpikambana aza tsy mahafantatra akory ny dikan’ny anaran’ny fikambanana misy azy ireo, mitovy tsy misy hafa amin’ny “Mitsangana ry Malagasy” kanefa izy rehetra mipetraka amin’ny seza fa ny vahoaka no nasaina nijoro nandritra ny ora maro nihaino ny rediredin’izay nandray fitenenana sy nikabary. Na izany fifanoheran-javatra izany fotsiny ihany aza dia ampy ilazana fa tsy misy fahamatorana ity “wake up Madagascar” ity.
Manaraka izany, mety ho “gaga ny vazaha” mahita ireto olona mitsitra amin’ny tany ireto, milaza ho mijaly sy mahantra kanefa olona tsara fitafiana, botabota mihitsy aza ny sasany. Raha toa ireny no antsoina hoe mahantra dia efa isan’ireo firenena matanjaka indrindra manerana izao tontolo izao izany i Madagasikara. Mbola misy olona mahantra lavitra noho ireny nivalampatra ireny mantsy any Etazonia sy Frantsa, tsy an’asa ary tsy manana trano akory. Isaorana ihany araka izany ny “wake up Madagascar” mba nampiakatra ny naotin’i Madagasikara naneho tamin’ireo vahiny hoe “tahaka izao no mahantra aty aminay”.
Saingy izao, mbola averina hatrany ity resaka ity. Tsy “sauvage” isika Malagasy na dia mahantra aza. Manana izany fahaiza-miaina izany isika Malagasy na dia mafy ady aza. Tsy fanao izany manasa lamba maloto eo imason’olona izany indrindra ho mandray vahiny. Ny ataon’ny mpiady an-tsena mifanala baraka imasom-bahoaka aza efa jerem-potsiny, dia ireo avara-pianarana sy mihevi-tena ho manam-pahaizana ao amin’ny “wake up Madagascar” indray ve no atoro izany ? “Gaga ny vazaha !”
Tsy fandriam-pahalemana eto an-tanàn-dehibe : Jiolahy folo isan’andro no tra-tehaky ny polisy
Firenena amerikana : Matoky an-dRajaonarimampianina
RECEF-fanomanana fifidianana : Tombontsoa ho an’i Madagasikara